Oduu Oolmaa Oromiyaa – Hagayya 18 fi 19, 2020 – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOduu Oolmaa Oromiyaa – Hagayya 18 fi 19, 2020
Oduu Oolmaa Oromiyaa – Hagayya 18 fi 19, 2020
Hagayya 18, 2020, Oromiyaa
Godiina Haraargee Bahaa Warraaqsi Jabaatee Jira! Loltuun Abiyot Kasayees Ilmaan Oromoo Fixaa Jira!
Aanaa ja’aanuu keessatti uummanni bahee falmaa hadhaawaatti seenee jira. Asaboot keessatti ijoollee xixiqqoo osoo hin hafiin falmaatti seenani jiru. Asaboot hanga ammaa namni 3 yeroo ajjeesan 8 ammoo mada’uun beekamee jira.
Hagayya 18, 2020 Godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo keessatti Qeerroo Maqaan isaa Afandii Yuusuf Bakar jedhamu badii tokko malee humna waraanaa PPtiin ajjeefamee jira! Qeerroowwan rukutamanii fi ajjeefaman kaanis:
1. Ahmad Imaam
2. Biftu Abdii Yusuuf Wadaay Umriin 11 mataa irra rasaasaan dhawaamte
3. Afaandi Yusuuf Bakar dugda duubaan rukutamte kan umriin 15ti tilmamamu dha.
4. Zaraa Abdii Dawiid Alii, arraddaa Amaan Umriin 13 rasaasaan adda irra rukkutamte amma hospitaala Harar jirti.
Loltuun Abiyot Harargee bahaa aanaa Fadis, magaalaa Facaatuu keessatti Qeerroo Fu’aadee Abubakaris ajjeesan.
Magaalaa Awwadaay keessatti Qeerroo Abdii Rashiid Umar, Aanaa Dadar Araddaa Huffee irraa dhufee suuqii banatee kan jiraatu mana hojii isaa keessatti hagayya 17, 2020 galgala ajjeefamee har’a ammoo awwaala dhorkamee masgiida keessa jira.
Aanaa Qarsaa magaalaa Dhangaggootti namni rukutame jira. Magaalaa awwadaay keessatti namootni rukutaman lakkoofsaan baay’ataa jiru. Waraanni Abiyot Kasaye Awwadaay keessatti Ganama kana dubartii ulfaa ajjeesanii jiraachuunis gabaafamaa jira.
Magaalaa awwadaay keessatti Hagayya 18, 2020 ganama qeerroowwan 4 boolla tokkotti awwaalamuun gabaafame.
1. Shaddii Abraahinm Umariishaa ni ajjeefame
2. Obsaa Mohaammad Magaalaa Watar keessatti ni rukutame
3. Ahamad Abdullaxiif Handhuura koosum ni dhawame yaala hin argannee
Magaalaa Cirootti dhukaasa waraanni Abiyot Kasaayee baneen dubartiin tokko kan karaa irra dhimma dhuunfaaf deemaa jirtu itti dhukaastee ajjeeste namoota hedduus madeessitee Hospitaalatti guuramaa jiru.
Harargee bahaa Aanaa Haramaayaa Araddaa Biiftuu Gadaa jedhamtutti ganama kana nama maqaan isaa Jamaal Abdii Weerartuu nama nyaata Abiyoot Kaasyeen bobbaafamen badii tokko malee ajjeefamee jira.
Hagayya 19, 2020
Loltuun Abiyot Kasaye Oromoo Ajjeesa Malee Bilisummaa Ajjeesuu hin Danda’u!
Qeerroon Oromoo Qindeessaa Yuuyyaa aanaa Haramaayaa Addeellee bakka jedhamutti Hagayya 18, ajjeefame argame.
Namoota aanaa Horomayaa keessatti Qeerroo tokko ajjeessanii shanedha hin owwaltan jedhanii ummata dhorkanii. Obbolaa isaa 3 qabanii hidhan.
Obsaa Mohaammad Harargee bahaa Wataritti rukutame du’aa fi jireenya gidduu jira, yeroo ammaa Hospitaala calanqoo keessatti argama.
Dubartii ulfaa Awwadaayitti ajjeefamte maqaan ishee Lammii jedhamtii naannoo ganda Usumaan magaalaa awwadaayitti ajjeefamte. Qeerroon Oromoo tokkos Dirre Dhawaatti ajjeefame jira.
Qabsaawaan ni kufa! Warraaqsi Itti Fufa! Bilisummaan ni dhufa!
Wallee Qabsoo Oromoo 2020: Sabboonaa Tafarraa – “WBO Keetu Diina Marsa”